स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives -
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आईसीयुमा, प्रधानमन्त्रीलाई भएको के हो ?
October 30, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आईसीयुमा, प्रधानमन्त्रीलाई भएको के हो ?
आज बिहानै ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा राखेर उपचार गरिरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्रीको शरीरमा पानीको मात्रा कम अर्थात् जलवियोजन (डिहाड्रेसन) प्रारम्भिक रिपोर्...
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ?
एजेन्सी । महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको...
दशैँको विदामा हेर्नुहोस् यी ५ फिल्म
October 3, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on दशैँको विदामा हेर्नुहोस् यी ५ फिल्म
द ग्राण्ड मास्टर निनियाँ फिल्म ‘द ग्राण्ड मास्टर’ मार्सल आर्टमा आधारित छ । यो फिल्म इप म्यान सिरिजको चौथो फिल्म हो । चिनियाँ र मार्सल आर्ट फिल्म मन पराउने दर्शकका लागि यो फिल्म हेर्नलायक छ । अझ यसअघि इप म्यान का तीन भाग हेरेका दर्शकल...
October 1, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on नेकपाले आकस्मिक रुपमा बोलायो सचिवालय बैठक
काठमाडौंः सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आकस्मिक रुपमा आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि नेकपाले आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । आइतबार राति सभामुख महराले संसद ...
हाम्रै नेपालमा: धनगढीकी खगित्रा शाहीले जन्माईन चार वटा बच्चा
September 26, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on हाम्रै नेपालमा: धनगढीकी खगित्रा शाहीले जन्माईन चार वटा बच्चा
काठमाडौं । धनगढीकी खगित्रा शाहीले चम्ल्याहा (चार शिशु)लाई जन्म दिएकी छिन् । सत्ताइस वर्षीया शाहीले सिनामङ्गलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा आज तीन छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनको उपचारमा संलग्न स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक चिकित्सक चन्दा कार्कीले जान...
रामेछापमा अखाध्य बस्तुकाे बिगबिगी, जुस देखी मासु सम्म ख्याल गरेर किन्नुहोस
September 24, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on रामेछापमा अखाध्य बस्तुकाे बिगबिगी, जुस देखी मासु सम्म ख्याल गरेर किन्नुहोस
रामेछाप । जिल्लाकाे सदरमुकाम मन्थली र रामेछाप बजारमा खाद्य तथा अन्य गरि ६० वटा पसलहरुमा अनुगमन गर्दा जुनार जुस देखी माछा मासु सम्म रामेछापमा किनेर खान डराउन प्रर्ने अवस्था देखीएको छ । रामेछापको चिनोकोे रुपमा रहेकाे जुनारको जुसमा समेत मिति बढि उल्ल...
छिनछिनमा पिसाव लाग्छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्
September 15, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on छिनछिनमा पिसाव लाग्छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्
प्रायः मानिसहरू शरीरका ससाना समस्यालाई बेवास्ता गर्छन् । जस्तो, घरीघरी पिसाब आउनु । दिनमा पाँचचोटिसम्म पिसाब आएको ठीकै हो किनकि यसबाट मिर्गौला स्वस्थ रहेको जानकारी पाइन्छ तर १०–१५ चोटि आयो भने चाहिँ खतरनाक पनि हुन सक्छ । छिटछिटो पिसाब आउनु भनेको म...
अस्पतालले जिउँदो शिशुलाई मृत घोषित गरेपछि….
September 13, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on अस्पतालले जिउँदो शिशुलाई मृत घोषित गरेपछि….
काठमाडाैं । कुनै बालकको मृत्यु भयो भने उनका आफन्त, बुवा आमाको रुवाई र वेदना सामान्य घटना हो । तर नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको भन्दै गाड्न लागेका शिशुनै रोएपछि सबै अचम्ममा परेका छन् । मृत्यु भएको भन्दै खाल्डो खनेर गाड्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा रोएपछि एक न...